Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Milan Skriniar Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
Ihe omuma anyi nke Milan Skriniar gosiputara Eziokwu banyere akuko nwata ya, Nko mbido ya, ezi na ulo, ndi nne na nna, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ibi ndu, uru di na ndu nke onwe. N'okwu ndị dị mfe, nke a bụ akụkọ banyere Ndụ Ndụ Onye ndụ, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ee, onye ọ bụla maara na azụ azụ bụ onye na - alụ ọgụ siri ike nke na - eme ngwa ikpochapụ. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ akụkọ ndụ Milan Skriniar, nke na-enye akụkọ zuru oke banyere ihe na-atọ ụtọ nke amachaghị na ndụ ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ banyere nwata Skriniar:
Maka ndị na-ebido bio, onye na-agba bọọlụ bụ Slovak. Amụrụ ya n’ụbọchị 11th nke February 1995 na Žiar nad Hronom, bụ obodo dị na Slovakia. Milan bụ otu n'ime ụmụ abụọ nne mụrụ ya amachaghị ya na nna ya na-akpọ Ľubomír Škriniar erughị obere.
Milan Skriniar Mmalite:
Azụ etiti bụ Slovakian site na ọmụmụ. Nsonaazụ nke nyocha n'ime ezinụlọ ya na-egosi na o nwere ike ịbụ onye agbụrụ Slovenska. Agbụrụ ahụ kacha nke Slovakia.
Milan Skriniar na-etolite Afọ:
Onye na-eme egwuregwu bọọlụ n’ọdịnihu etolitere n’obodo a mụrụ ya na Žiar nad Hronom ya na nwanne nwoke nke okenye. N'ịbụ ndị tolitere n'obodo ukwu, Milan nwere naanị otu nrọ nwata. Nrọ ahụ bụ ka ọ bụrụ onye egwuregwu na igwu egwu maka ọtụtụ nnukwu klọb.
Milan Skriniar Mụrụ okirikiri:
Gwa eziokwu, nrọ Slovak nwere egwuregwu nwere ihe jikọrọ ya na a mụrụ ya n'ezinụlọ nwere mmasị na egwuregwu ahụ. N'ezie, nna Milan bụbu onye egwuregwu bọọlụ ebe nwanne ya nwoke nke okenye nwere akụkọ ihe mere eme na-egwu egwuregwu ahụ.
Otu egwu bọọlụ bidoro maka Milan Skriniar:
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọ malitere ịzụ ya na mpaghara Žiar nad Hronom mpaghara tupu ya eruo afọ 10. Ka ọ na-erule oge Milan dị afọ iri na abụọ, ọ hapụrụ ụlọ ọgbakọ ya ka ọ bido ịmalite ọrụ siri ike na MŠK Žilina.
Dennis Bergkamp Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ọ bụ na MŠK Žilina ka nwa mmefu nke football nọrọ ọtụtụ afọ nke ọrụ ya n'ịzụlite usoro ga-eme ka ọ bịaruo nso na nrọ ya nke igwu egwu maka nnukwu klọb. N'oge ọrụ ya na Žilina, Milan mere egwuregwu mbụ ya na klọb ahụ na Slovak Super League egwuregwu megide FC ViOn Zlaté Moravce. E mechara zigara ya klọb ahụ na mbinye ego.
Milan Skriniar Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Know mara na Slovak na-eto eto bidoro ịmalite ọrụ ya na bọlbụ dị ka onye na-awakpo obi ọjọọ na-emekpa mmegide ndị na-emegide ya ihu? Agbanyeghị, ọ ghọrọ onye egwuregwu na MŠK Žilina.
Mgbanwe ndị na-esote n'ọkwá talent football hụrụ ya ka ọ gbanwee na-egwu na ikike nke etiti azụ na Zlaté Moravce (2013) na Italian Side Sampdoria ebe o nwere okwu otu afọ (2016-2017).
Adriano Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Biography nke Milan Skriniar- Bilie Iji Akụkọ nke:
Mgbe etiti ahụ mechara hapụ Sampdoria maka Inter Milan, ọbịbịa ya kụrụ isi okwu n'ihi na nnyefe ego € 20 nde mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ Slovak kachasị ọnụ n'oge niile.
Ọ baghị uru ikwu ọtụtụ ihe, etiti azụ ahụ mara mma na oge mbụ ya (2017-2018) ya na Nerazzurri ma nyekwaara ha aka inweta ọnọdụ na UEFA Champions League na nke mbụ n'ime afọ isii. Ndi ozo dika ha kwuru bu akuko.
Lautaro Martinez Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Milan Skriniar Love Life- Nwanyi nwanyi, Nwunye, umuaka?
O doro anya na mmadụ ole na ole obi Slovak na-akụ. Otu n'ime ha bụ enyi nwanyị ya na ihe nlereanya ya, Barbora Hroncekova. Birda ịhụnanya ahụ abụwo ụzọ kemgbe Milan na-egwu Sampdoria.
N'abụbeghị nwunye Milan, Barbora's Instagram peeji nke nwere aha nna ya na nke ya. Ọ dịghị onye ọ bụla nwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị (nwa) n'alụghị di na nwunye ma ọ ga - abụ naanị oge tupu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ adaa.
Milan Skriniar Ezinụlọ:
Tupu enyi nwanyị agbachitere ahụ batara na foto a, nna ya, mama ya na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ bụ isi mmalite nke 100 pasent nke ịhụnanya na nkwado ọ nwetara. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nna na nne Milan Skriniar yana ụmụnne ya na ndị ikwu ya. Enweghị oge ọzọ, na-ahapụ ọganihu.
Banyere Milan Skriniar nne na nna:
Malite, Ľubomír Škriniar bụ nna nke etiti azụ. Ọ bụbu onye egwuregwu bọọlụ amateur na enweghị mgbagha iji nyere etiti azụ aka ịzụlite mmụọ na-enweghị atụ maka egwuregwu ahụ.
Ọbụna n'oge ọ na-etinye ihe omume Milan Skriniar, nna ya ka na-enyocha nyocha nke nwa ya nwoke ma kwụsị ịkwụsị ya iji nwee ihe ịga nke ọma. N'aka nke ya, amachaghị nke nne nne azu. Mana ọ dịghị mkpebi ọ bụla na ọ na-esonyere ndị ọzọ so n'ezinụlọ ya iji lelee egwuregwu azụ.
Banyere Milan Skriniar na ụmụnne ya:
Onye na-agbachitere etiti abughi etolite, ya na nne ya na papa ya. N'ebe ndị nne na nna Milan Skriniar nọ, o nwere obere nwanne nwoke ama ama ama ama na-abanyekwa n'egwuregwu bọọlụ mana akwụsịghị dị ka ọkachamara.
Banyere ezinụlọ ezinụlọ Milan Skriniar na ndị ikwu ya, enweghị ndekọ banyere nne na nna ya na nne na nna ya. N'otu aka ahụ, amachaghị nke nne na nna nwanne ya Skriniar. Ọganihu ahụ gafere ụlọ ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ndụ nke Milan Skriniar:
Ikwu agwa banyere akparamagwa nke ya, know mara na ihunanya, nlegide anya na obi umeala na-akwali ya? Na mgbakwunye, azụ etiti ahụ nwere oké ọchịchọ ma na-arụsi ọrụ ike dịka ndị amụrụ n'okpuru akara zodiac Aquarius.
Mgbe Milan anaghị azụ ọzụzụ ma ọ bụ na-egwu bọl, enwere ike ịhụ ya ka ọ na-enwe ntakịrị mmasị na ihe omume ntụrụndụ. Ha gụnyere ịgụ, igwu egwuregwu vidio, ime njem na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ndụ Milan Skriniar:
Onye na-agbachitere etiti nwere atụmatụ nke 4 Nde Euro maka nke 2020. Iyi nke ego na-enyere aka na akụ na ụba onye ọkpụkpọ bụ ụgwọ ọrụ na ụgwọ ọ na-anata maka ịbụ ebe etiti dị ịtụnanya.
Ọkacha bọọlụ na-eritekwa oke site na nkwenye. Ọ nwere nnukwu akụ na ụba na-ebi ndụ okomoko. Maka Milan, ibi ndụ okomoko na-agụnye ibi n'ụlọ dị iche iche, ịnya ụgbọ ala ma nwee oge dị mma n'ụlọ ezumike.
Eziokwu nke Milan Skriniar:
Iji kọọ akụkọ banyere nwata anyị na akụkọ gbasara akụkọ ndụ anyị, ndị a bụ ihe amachaghị banyere ma ọ bụ ihe a na-akọghị banyere etiti azụ.
Eziokwu # 1 - FIFA 2020 ọkwa:
Know maara na Milan Skriniar nwere ọkwa FIFA n'ozuzu ya nke isi 86? Site n'ọkwa dị otu a, ọ dị naanị ihe ise nwere ike ịnọ Virji Van Dijk yana isi ihe dị mma karịa Niklas Sule onye nwere ihe ruru 85 isi.
Eziokwu # 2 - Milan Skriniar's Religion:
Mgbe anyị nyochachara ọtụtụ oge, anyị abịala nkwubi okwu na nke a. Eziokwu bụ, ọ na-esiri ike ịkọwapụta ụdị okpukpe Skriniar na-eme n'ihi na ọ hapụghị ihe ọ bụla. N'ezie, nnukwu ajụjụ bụ ma etiti azụ ọ bụ onye kwere ekwe ma ọ bụ na ọ bụghị.
Eziokwu # 3 - Milan Skriniar's Pet:
dika otutu ndi okacha amara n’egwuregwu bọọlụ, onye na-agba bọọlụ na-anabata nnabata ya mgbe ọ bụla ọ bịara n’ụlọ. Nwa obere ihe mara mma ka ya na Milan nọrọ ruo ọtụtụ afọ, ọ na - egosipụtakarị ya na foto Instagram ya.
Aha n'uju Milan Škriniar
aha otutu Udogwu
Ụbọchị ọmụmụ Thbọchị 11 nke Mach 1995
Ebe amụrụ onye Žiar nad Hronom na Slovakia
Egwuregwu Etinye azụ
Ndị nne na nna Ubomír Škriniar (Nna)
enyi nwanyị Barbora Hroncekova
ụgwọ Nde Euro 5.5
Ngwakọta Net Nde Euro 4
elu 6 ụkwụ 2 sentimita.
Nwata nwoke Žiar nad Hronom
omume ntụrụndụ Readgagharị, na-egwu egwuregwu vidio, na-eme njem ma soro ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nwee oge dị mma.
anu ulo Dog
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ edemede anyị na Milan Skriniar. Anyị kwenyere na ị matala ya ugbu a ma nwee ekele maka onye ọ bụ na otu o ritere na ụwa nke bọọlụ. Anyị nwere olile anya na ị chọtara ọdịnaya ndị anyị wepụtara maka ya ka ọ bụrụ nke ziri ezi na nke ziri ezi? ọ bụrụ na ọ bụghị, biko dọta uche anyị na ihe ọ bụla na-adịghị ele anya site na iji igbe igbe.
Alessandro Bastoni Storymụaka Akụkọ Ngwakọta Eziokwu Untold Biography
Santiago Solari Nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Diego Godin Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Samuel Eto'o Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Mauro Icardi Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
Bọchị gbanwee: Mee 6, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 14, 2021
Mateo Kovacic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ